Patronpath Inotangisa Nyowani Webhu Kuvapo | Martech Zone
Chishanu, May 2, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pandakatanga kupinzwa pa Patronpath, Ndakatya (hongu, ndizvozvo) pawebhusaiti yaive yakwira. Yaive yakachena mwenje, isina mapeji, isina-kumashure-magadziriso (kunyangwe SWFObject yakange yakatakurwa), hapana nzira yekuvandudza zvirimo… uye kupfuura zvese, hapana traffic.
Yakanga iri saiti inodhura yakawanda, isina kudzoka pane kudyara. Pandakaenda kusangano rakagadzira saiti iyi, pakange pasina kukumbira ruregerero. Muchokwadi, pandakanyunyuta nezveSEO, ivo vakapa imwe kontrakiti ine mutengo wekuvandudza saiti. Ndihwo hwaive uswa hwekupedzisira! Hapana agency ine hana chero ipi zvayo yaizovaka saiti iyo isina anogona kuwana.
Zvakwana zvekupenga! Mark Gallo neni takashanda neyedu Branding uye Kushambadzira vadyidzani kuKristian Andersen uye akaita kuti vagadzire saiti yedu, inoitwa ne Imavex yemukati manejimendi manejimendi. Kristian ane tarenda risingadaviriki musangano rake.
Isu takafamba nematanho mashoma enzvimbo saiti tisati tagadzikana pane ino marongero. Ini ndinotenda inotaura nezvehunyanzvi hwekambani yedu pamwe nesimba iro chiratidzo chedu chiri kutanga kuwana simba nacho!
Iyo saiti yave kurarama, uye yakanaka kwazvo uye yakapusa kufamba. (Kana iwe uchishamisika - hongu, blogging ichave chinhu mune ramangwana). Heino skrini:
Ndiri kufara ichi chaive chimwe chinhu chatakakwanisa kuendesa mberi tisati tabhadhara Director vedu Vatsva veKushambadzira, Marty Shiri! Ndingadai ndakavenga kuve ndakapa saiti yekare.
May 2, 2008 pa 9: 01 PM
Ndeipi iyo agency yakakubhadharisa iwe webhusaiti yaisakwanisa kunyoreswa neinjini dzekutsvaga??
May 2, 2008 pa 10: 12 PM
Ndingakuudza, asi ini handidi kumutsa zviroto zvekare mukati mako, Jim!
May 3, 2008 pa 9: 49 PM
Yakanaka inotarisa saiti Doug. Handisi kumirira kukuratidza imwe saiti nyowani (hint hint) mumavhiki mashoma 🙂